Tattoo-ka-fulisyada iyo roogayaasha: macnaha iyo uruurinta naqshadaha | Tattoo
Antonio Fdez | 10/07/2021 21:41 | La cusbooneysiiyay 24/07/2021 21:31 | Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta
Ma waxaad raadineysaa fikrado ku saabsan sawirkaaga xiga? Haddii aad ka fekereyso inaad sameyso a Tattoo cusub oo qaabka Old School ah, waxaan haynaa soo jeedin aad u xiiso badan oo sida xaqiiqada ah soo jiidan doonta dareenkaaga.
Waxay ku saabsan tahay tattoos of-aadanku iyo toorrey. Isku dar ah laba walxood oo caan ku ah kuwa jecel tattoos-ka caadiga ah. Waxaan horeyba ula dhaqannay labada tattoos si gooni gooni ah, hadda waxaan soo ururin doonnaa iskudhaf labadaba waxaanan kugula socodsiineynaa macnahooda iyo fikradaha labadaba si naqshadeyntaadu gaar u noqoto. Marka akhriska sii wad!
1 Micnaha taatoobyada ubaxyada iyo toorreyda
1.1 Micnaha sawirada toorreyda
1.2 Ubax iyo middi wada socda
2 Fikradaha Tattoo-ka oo leh ubaxyo iyo digsiyo
2.1 Toorey loo yaqaan 'Classic' iyo 'tattoo tattoo'
2.2 Toorey oo dhabarka ayuu ka kacay
2.3 Tattoo leh ubax, wadnaha iyo toorrey
2.4 Tattoo madow iyo caddaan ah
2.5 Tattoo gacmo oo leh toorrey iyo kacay
2.6 Bakhaar, toorrey iyo kacay
2.7 Toorey, haweeney kacsan oo macquul ah
2.8 Toorey iyo cherry blossoms tattoo
3 Sawirrada Tattoos Roses iyo Daggers
Micnaha taatoobyada ubaxyada iyo toorreyda
ka Tattoos-ubaxyada iyo toorreyda ayaa leh astaamo aad u xiiso badan maadaama macnaha toorreyda iyo tan ubaxyada labaduba la isku daray. Waa inaan si gooni gooni ah u falanqeyno macnaha mid kasta oo ka mid ah walxaha ka kooban qaababkan xiisaha leh ee xiisaha leh.
Micnaha sawirada toorreyda
Tattoo sawirada waxay muujinayaan astaan ​​la xiriirta allabaryo. Waana ku filan in dib loo jaleeco. Waxaa jira dhaqammo badan oo adeegsaday toorrey oo ah “aaladda” lama-huraanka u ah dhaqan kasta oo xayawaan ama naf hurid ah. Taasi waa sababta dadka go'aansada inay seefaha jidhkooda ku dhajiyaan ay sidaa u sameeyaan si ay u muujiyaan inay ka adkaadeen xaalado aad u murugsan oo calaamadeeyay jiritaankooda muhiimka ah. Daggers, dhanka kale, waxay kaloo astaan ​​u noqon karaan khiyaano (yaanan ilaawin, tusaale ahaan, odhaahda sida "mindi" oo macnahooda sarbeebta ah micnaheedu yahay). Waxaa sidoo kale jira maqaallo dhowr ah oo aan ugu talagalnay Tatuantes-ka Tattoo sawiro.
Tattoo macnaha macnaha
Dhinaca kale, oo sidaan horayba ugaga hadalnay qormooyinki hore, Tattoos Rose ayaa kala duwanaan doona macnahooda iyadoo kuxiran midabka ubaxa laftiisa. Tusaale ahaan, ubaxyo huruud ah waxaa lala xiriiriyaa farxad iyo raynrayn, halka ubaxyo dabiici ah ay astaan ​​u yihiin jacaylka iyo jacaylka. Waxay sidoo kale la qabsadeen la xiriirta nolosha, jacaylka iyo xitaa galmada, gaar ahaan haddii ay yihiin ubaxyo cusub. Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan macnaha tattoos Rose Waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso qoraaladeenii hore.
Ubax iyo middi wada socda
Hadda oo aan si gooni ah u aragnay macnaha labadan shay, bal aan isla wada eegno. J) Haa, Tattoos-ubaxyada iyo toorreyda ayaa sida caadiga ah astaan ​​u ah labada nolosha: ubaxku wuxuu u taagan yahay waqtiyo wanaagsan, farxad, nolol iyo qurux halka toorreydu ay tahay astaanta daqiiqadaha adag iyo xitaa mugdi, khiyaano iyo dhinac fiiqan.
Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa a calaamadda khiyaanada, oo si cad u mataleysa toorrey, iyo qallooc jacayl leh oo ubax leh, sarbeeb jacayl jacayl ah.
Intaas waxaa sii dheer, haddii toorreyda ay ka mudato ubax (gaar ahaan haddii ay la socoto dhawr dhibic oo dhiig ah) macnaha ayaa ku qallooc cusub oo ay "dhinaca mugdiga ah" (toorreygu) ku garaacdo nolosha (ubax).
Fikradaha Tattoo-ka oo leh ubaxyo iyo digsiyo
Marka xigta waxaan ku siin doonnaa xoogaa fikrado ah si ay sawirkaaga ubaxyada iyo toorreydu u gaar noqdaan. Waxaad arki doontaa taas, marka lagu daro qaabka dhaqameed, laga yaabee kan ugu caansan dhammaantood, waxaa jira astaamo iyo qaabab kale oo badan.
Toorey loo yaqaan 'Classic' iyo 'tattoo tattoo'
Mid ka mid ah qaababka ugu caansan ee tatooskan ayaa ah midka adeegsanaya qaab dhaqameedka. Adoo adeegsanaya xariiqyo qaro weyn iyo midabbo dhalaalaya, midabyo madmadow, waa qaab u muuqda mid ku fiican tattoo-kan.maadaama ay u adeegto gudbinta xoogga naqshadeynta, iyo in si gaar ah loo muujiyo labada walxood, gaar ahaan haddii midabbada madow loo isticmaalo toorreyda iyo casaanka dhalaalaya ee ubaxyada.
Toorey oo dhabarka ayuu ka kacay
Haddii aad rabto naqshad weyn, dhabarka ayaa ah meeshaada. In kasta oo ay noqon karto naqshad toosan, qaabka loo yaqaan 'toorreey' darteed, haddii uu cabbir weyn ku leeyahay qoorta iyo hooskaba wuxuu u ekaan doonaa si weyn Haddii aad rabto inaad siiso mug badan, tixgeli inaad ka saarto ubax, sida sawirka, si ay u qaadato meel bannaan. Waa goob ay ku taallo tattoos macquul ah oo leh faahfaahin weyn sidoo kale aad u qabow.
Tattoo leh ubax, wadnaha iyo toorrey
Quluubtu waa mid ka mid ah walxaha sida aadka ah isugu xidhan toorreeyyada iyo ubaxyada, maxaa yeelay waxay badanaa astaan ​​u yihiin khiyaano iyo niyad jab. Ubaxyadu waxay leeyihiin hawsha, qaababkan, si ay u jilciyaan farriinta xoogaa (marka lagu daro sidoo kale waa caado wehel u ah qalbiyada): in kasta oo qalbiga qofkaas la khiyaameeyay, haddana wuxuu sii wadaa aqoonsiga quruxda nolosha.
Tattoo madow iyo caddaan ah
Si aad u hesho taabasho aad u riwaayad ah, u tag naqshad madow iyo caddaan ah. Waxay sidoo kale u muuqataa mid aad u fiican qaabka dhaqanka ama xitaa qaab fudud. Adiga oo kaliya isticmaalaya midabadan waxay taageeri doontaa nashqadaha xoogaa yar, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon kuwa aan rabin gabal aad u weyn.
Tattoo gacmo oo leh toorrey iyo kacay
Toorreyda iyo ubaxyada, oo ah naqshad noocan oo kale ah, ayaa sidoo kale si aad u wanaagsan ula socda naqshado kale. Marka laga hadlayo sawirka, waa midda loo yaqaan 'Tattoo' kaas oo ku daboolaya dhammaan gacmaha gabal yar ama ka yar, laakiin dhammaantood waxay raacayaan qaab gaar ah iyo midab midab caadi ah leh, si aysan iskaga hor iman.
Bakhaar, toorrey iyo kacay
Haddii aad jeceshahay wax ka sii daran, waad dooran kartaa raac toorreyda iyo ubax xoolaha qaar. In kasta oo kiiskan la xushay bakhaar, abeesooyinka sidoo kale waa wax aad u badan, kuwa kale oo boqoradaha ka mid ah taatikada ugu caansan. Xusuusnow in ay kuxirantahay xayawaanka aad dooratay, macnaha tattoo-ga ayaa ka duwanaan doona, maadaama ay la xiriiri doonto.
Toorey, haweeney kacsan oo macquul ah
Waxaa jira xaalado kale oo taatikada loo yaqaan 'Roses' iyo 'toorreyda' aysan aheyn kuwa halyeeyada ah, laakiin waxay lasocdaan gabal caan kale leh. Tani waa kiiska naqshadaan, oo uu sameeyay farshaxan tattoo ah iyo qurxinta sabuurad, inkasta oo lagu samayn karo qofkasta maqaarkiisa. Halkan haweeneydu waa halyeeyada dhabta ah ee naqshadeynta iyo ubax iyo seefta, in kasta oo ay muhiim u tahay macnaha ugu dambeeya ee gabalka, weli waxay ku sii jiraan asalka.
Toorey iyo cherry blossoms tattoo
Ugu dambeyntii, Ma hilmaami karno in, marka lagu daro ubax, ay jiraan ubaxyo kale oo badan oo si weyn ugu eegi kara toorreyda.. Gaar ahaan haddii aad jeceshahay tattoos-ka nooca Japan-ka ah, ee aad ku dooran karto ubax Jaban ah oo caadi ah (qaabkan, geedo cherry ah ayaa la doortay, in kasta oo ay sidoo kale noqon karaan chrysanthemums, plum blossoms ...) iyo toorrey samurai ah.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay maqaalkan tattoos-ka ubaxyada iyo toorreyda. Noo sheeg, ma leedahay tattoo sidan oo kale ah? Maxay uga dhigan tahay kiiskaaga? Qaab noocee ah ayaad dooratay? Xusuusnow inaad noo sheegi karto waxaad rabto faallooyinka!
Sawirrada Tattoos Roses iyo Daggers
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta » Tattoos of Roses iyo daggers: ururinta naqshadaha
Aad ayey u fiican yihiin
Uruurinta fallaadhaha fanka, si loogu asteeyo dhiirrigelinta iyo xorriyadda